Ukubaluleka kwabavelisi kuvavanyo lokuqina kunye nokuqina koomatrasi
Okwangoku, kukho iintlobo ezininzi oomatrasi ezivenkileni, kunye oomatrasi izinto ezahlukeneyo kunye nezinyuko anganika abantu iimvakalelo ezahlukeneyo ubuthongo. Nangona kunjalo, kule minyaka idlulileyo, iqondo elingafanelekanga lokuhlolwa koomatrasi lihlala liphezulu, kwaye ixesha lokudibana koomatrasi kunye nehum ...
Umgangatho omtsha welebheli ye-ergonomic yokulala usempilweni
Imigangatho emitsha yeleyibhile ye-ergonomic yokulala esempilweni, ubungakanani bokuqina, ukuqina kwesingqimba ngasinye, izinga lokulahleka kwe-hysteresis, ezi datha zinokubonisa idatha efanelekileyo yematrasi.
I-CIFF yama-47 yeGuangzhou igqitywe ngempumelelo
Umboniso weChina wama-47 weFanitshala yeFenitshala (i-CIFF) eGuangzhou
I-China China Furniture Fair (CIFF) Guangzhou Sizakuzimasa i-47th China International Furniture Fair (CIFF) Guangzhou ukususela ngomhla wama-28 ukuya ku-31, Matshi, 2021, inombolo yethu umnquba B zone, S121A38, wamkelekile ukutyelela.
Unyaka Omtsha waseTshayina (uMnyhadala weNtwasahlobo) Iholide
Fridends wam othandekayo, siza kuba kwiholide kuNyaka oMtsha waseTshayina ukusuka nge-3 ukuya kwi-19, ngoFebruwari, ngo-2021, unokuhlala unxibelelana nathi nangaliphi na ixesha ngexesha leholide, siya kukuphendula ngokukhawuleza. Unyaka omtsha ovuyayo kunyaka weTshayina we-OX. Enkosi kunye nokuzithoba, uClaire S ...
Ubungakanani beemarike zelebhu zelebhu ukusuka ku-2021 ukuya ku-2027 | Ingeniso eyomeleleyo kunye nembono yokhuphiswano lweenkokheli eziphezulu: Waldner, Kewaunee Scientific Corp, Imveliso ye Mott
[Los Angeles, United States], [United States], Janyuwari 2021 - Ingxelo yophando lwentengiso yophando lwaselabhoratri ibandakanya ukuqonda ngezinto eziphambili [Ingxelo yoPhando lweLebhu yeLabhoratri yeHlabathi yeLabhoratri 2021] abathathi-nxaxheba abaphambili beemarike kunye neprofayile yenkampani esetyenzisiweyo Kwaye baceba ukuba kubo. Oku kunceda abathengi beLebhu ...
Izinto zovavanyo lwefanitshala kunye neendlela
Uvavanyo lwefanitshala kwimarike luhlulwe ikakhulu kwidesika yeofisi kunye nokuvavanywa kwesitulo, ukuvavanywa kwesofa, ukuvavanywa komatrasi, ukuvavanywa kweemveliso zasendlini, njl njl. stru ...
Kutheni le nto ilaphu liphuma?
Ijezi yam endiyithandayo ihlala ine-pilling. Siyintoni isizathu? Kwinkqubo yokulungiswa kwemisonto yoboya kunye nokunxiba ijezi, ichaphazeleka kwimikhosi eyahlukeneyo yangaphandle njengokukhuhlana kunye namandla okutsala. Iintsinga zoboya kumsonto woboya kulula ukuba uzitsibe ukuze wenze isangqa okanye ungatshatanga.
Imiqathango yokuma kwelebhu yefanitshala
Izixhobo ze-TST (iFujian) Co., Ltd. igxile kwi-R & D kunye nokuveliswa kwezixhobo zovavanyo lwefanitshala, ukubonelela ngezixhobo ezinokuthenjwa kunye nezixhobo kumashishini ahlukeneyo, amandla emveliso aqinileyo, ulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nokuthengisa kwangaphambili kunye nenkqubo yenkonzo yasemva kwentengiso, ukuze ukugcinwa ...
Iimoto zifuna izixhobo zokuvavanya
Njengoko iimfuno zabathengi zembonakalo kunye netekhnoloji yeemoto inyuka, iindawo ezahlukeneyo zemoto zihlala ziguquka. Isihlalo semoto ikakhulu simalunga nentuthuzelo, kwaye ulwakhiwo olusisiseko alutshintshanga kangako, kodwa umbandela, umsebenzi kunye noyilo lwembonakalo zonke ziinguqu ezinkulu ...
Izixhobo ze-TST zityelele iPaki yoLutsha yoVulindlela weDyunivesithi yoBuchule
Kutshanje, umphathi jikelele wee-TST Instruments (iFujian) Co, Ltd. utyelele i- "Youth Pioneer Park yeLiming Vocational University" ukuqhuba ngokunzulu utshintshiselwano kuyilo loomatshini nakwintsebenziswano yokuvelisa. Umhlohli weKholeji yoVulindlela yoLutsha wazisa ngoku ...
Amanqaku aphambili okuthenga izixhobo zovavanyo lwamalaphu
Kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo ezilukiweyo ezinemisebenzi eyahlukeneyo kunye nexabiso. Xa uthenga izixhobo, akufuneki wazi kuphela ulwazi lobuchwephesha bokusebenza kwempahla elukiweyo kunye nokusetyenziswa kwemveliso, kodwa uqonde nokusebenza kunye neempawu zezixhobo ezivelisiweyo ...
Izixhobo zokuvavanya ifanitshala yeTST
Kule minyaka idlulileyo, ii-TST Instruments ziye zaseka zaza zagqibezela ikhonkco elipheleleyo lemizi-mveliso yophando oluzimeleyo lophando kunye nophuhliso lwetekhnoloji lwezixhobo kunye nezixhobo, ngakumbi kuba intengiso yezixhobo zovavanyo lwefanitshala ikhuthaze kakhulu ...
Indlela yokuphuma kwishishini lefenitshala
Okwangoku, ishishini lefanitshala yasekhaya lijamelene nemeko yenzuzo esezantsi, ukunyuka kweendleko, kunye nokhuphiswano olomeleleyo. Ukuphuma njani kule ngxaki sele kuyingxaki ezingqondweni zamashishini amaninzi. Ewe kunjalo, ngaba yonke into inenkqubo yophuhliso? Kuphela ngokuqhubela phambili ...
Isixhobo seTST siyaqonda ukulawulwa okukude kwe-APP
Ngokukhula okuqhubekayo kwe-Intanethi, iimfuno zobuchwephesha kumzi mveliso wesixhobo ziyenyuka kwaye ziya phezulu, kwaye ibango liyanda. Ibinzana elithi "ingqwalaselo sisiseko" sikwasebenza nakwishishini lezixhobo. Ubukhulu obukhulu, kulula ukuphatha ...
Izizathu ezithathu zefanitshala yeofisi engafanelekanga
Uninzi lwefanitshala yeofisi yanamhlanje ixhonywe neminqwazi ethile esemgangathweni kwaye iqulethe izinto eziyingozi. Uhlalutyo lwezixhobo zeTST: Zintathu izizathu eziphambili zefanitshala yeofisi engafanelekanga. 1.Umxholo weglu ogqithisileyo Abathengi abaninzi bakholelwa ukuba ukhuni ...
Kwiminyaka yakutshanje, ifenitshala ye-ofisi yefenitshala yaseTshayina iye yaphuhliswa kakhulu.
Kwiminyaka yakutshanje, ifenitshala ye-ofisi yefenitshala yaseTshayina iye yaphuhliswa kakhulu. Ngelixa ukukhula okukhawulezileyo kwefanitshala yeofisi, umgangatho wemveliso ikwangumbandela ongenakuhoywa. Ke ngoko, abavelisi befenitshala bahlala bekhetha izixhobo zovavanyo lwefenitshala njengeprod ...
Ifenitshala yeeMveliso ezingama-21 noNikezelo eTshayina 2015 ebibanjelwe eShanghai ukusuka nge-9 ukuya kwi-12, Sep
Sikhoyo kumnquba E12A083 e Shanghai New International Exhibition Centre
Kutheni iimveliso zefanitshala zifuna ukuvavanywa?
ngomphathi ku 19-05-30
Abavelisi abaninzi bavelisa iimveliso zefanitshala kwaye bazibeka ngqo kwintengiso. Bakholelwa ukuba okoko nje isihlalo sizinzile, sinokuba sihle, kwaye asifuni ukubonwa ngesixhobo. Ngapha koko, ayilunganga. Abavelisi kufuneka basebenzise idatha ukuthetha malunga nokwenza iimveliso zibe nkulu ...